အညတရအကျဉ်းသားရဟန်းတော်များ (၁၈) – ဆရာတော်ဦးတိလောကာဘိဝံသ | MoeMaKa Burmese News & Media
၁၉၉၀ ခုနှစ်က မန္တလေးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင် ပတ္တနိကုဇနကံဆောင်ပွဲမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအများအပြား န၀ တ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ထောင်ချတာခံခဲ့ရပါတယ်။ မန္တလေးမှာဖြစ်ပွားတဲ့ ပတ္တနိကုဇနကံဆောင်မှုဟာ ၀ိနည်းတော်နဲ့အညီဖြစ်ပါ တယ် လို့ ထောက်ခံခဲ့ကြလို့ ရန်ကုန်မှာသီတင်းသုံးတဲ့ မေဒိနီဆရာတော်၊ မဟာဗောဓိဆရာတော်၊ တိပိဋကဆရာတော် စတဲ့ဆရာတော်ကြီး (၉) ပါး အဖမ်းခံရပါတယ်။
အဲဒီ (၉) ပါးထဲမှာ အဖမ်းခံရတဲ့ဆရာတော်တပါးကတော့ အင်းစိန် ရွာမ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်က ဆရာတော်ဦးတိလောကာဘိဝံသပါ။ ဆ ရာတော် ဦးတိလောကာဘိဝံသဟာ ကျမ်းပြုဆရာတော်တပါးဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်ရဟန်းရှင်လူတွေကို အဘိဓမ္မာသင်တန်းပို့ချပေးနေတဲ့ဆရာ တော်တပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးတွေကို န၀တစစ်အစိုးရက သင်္ကန်းဝတ်တွေ သံဃာအတုအယောင်တွေ ဆူပူအောင်လှုံ့ဆော် သူတွေလို့ အခြေအမြစ်မရှိစွပ်စွဲပြီး အတင်းအဓမ္မသင်္ကန်းဆွဲချွတ်ပြီး ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တာပါ။ ဆရာတော်ကြီးကို တပည့်တွေကထောင်ဝင်စာသွားတွေ့တဲ့အခါမှာ ဦးတိလောကဆိုရင် တွေ့ခွင့်မရဘဲ လူနာမည်ဦးတင်လှဆိုမှ ပေးတွေ့ကြောင်း ဆရာတော်ကြီးကိုထောင်ဝင်စာတွေ့ဘူးသူ ဒကာတယောက်ကပြောဘူးပါတယ်။
တကယ်တော့ ပတ္တနိကုဇနကံဆောင်တယ်ဆိုတာ သံဃာတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်တဲ့သူတွေနဲ့ ဘာသာရေးအရ ဆက်ဆံမှုမလုပ် ဘဲနေတာပါ။
မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကျုးလွန်သူများအမြင်မှန်ရပြီး နောက်ထပ်တဖန်မကျူးလွန်မိအောင် အကုသိုလ်တွေ ရှောင်ကြဉ်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ မွန် မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း စစ်အာရှင်တွေဆိုတာ သူတို့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်လာမယ်၊ သူတို့အာဏာပါဝါကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေကိုမဆိုထားနဲ့ ဘုရားကိုတောင် ထောင်သွင်းအကျဉ်း ချမဲ့သူတွေပါ။ ဆရာတော်ကြီးတွေကို ဖမ်းဆီထောင်ချရုံနဲ့အားမရသေးဘဲ ကျောင်းဒကာစီမံချက်တွေရေးဆွဲပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းအ၀င် အထွက် စစ်ဆေးခြင်း၊ သာသနာဝင်မှတ်တမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဧည့်စာရင်းစစ်ခြင်း စစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေ ဖမ်းဆီး ထောင်ချခြင်း စတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြသလို စစ်အစိုးရအလိုကျ အကြိုက်ဆောင်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သံဃာတော်တွေကိုဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူး တွေပေးပြီး တပ်မတော် ကြည်းရေလေမိသားစုတွေစုပေါင်းပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်လှူခြင်း စတာကိုပြုလုပ်ပြီး ရဟန်းသံဃာတော်တွေမညီမညွတ်ဖြစ်အောင် သွေးးခွဲလှုံ့ဆော်စည်းရုံးခဲ့ကြတာ န၀တစစ်အာဏာရှင်တွေပါ။
ဆရာတော်ဦးတိလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိနိုင်ဖို့ကို နေလင်းရေးသားတဲ့ လူရှင်သင်္ချိုင်းများအကြောင်းစာအုပ်ထဲမှထုတ် နှုတ်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်တို့နေတဲ့ အင်းစိန်ထောင် အဆောင် (၃) ကို ထောင်ကျနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၃) ယောက် ရောက်လာတယ်ဆိုလို့ ထောင်ထဲက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားတွေရဲ့အကြည့်တွေအားလုံးဟာ ထောင်မှူးရုံးခန်းရှေ့မှာ ပုံစံထိုင်နေရတဲ့ အကျဉ်းသား (၃) ယောက်ဆီ ရောက်ရှိသွား ပါတယ်။
ထောင်မှူးရုံးခန်းရှေ့မှာ ပုံစံထိုင်နေတဲ့သူတွေကို သေသေချာချာကြည့်မိမှ သံဃာတော်တွေဖြစ်နေတာကို စိတ်ထိခိုက်ဖွယ် တွေ့လိုက်ရပါ တယ်။ န၀တက ဆရာတော်တွေကို “သင်္ကန်းဝတ်တွေ သံဃာအတုအယောင်တွေ” လို့ ယုတ်မာကောက်ကျစ်စွာ စွပ်စွဲထားတာဖြစ်ပြီး ဆရာတော်ကြီးတွေကို လူဝတ်လဲထားတာကို ရင်နင့်ဖွယ်တွေ့ရပါတယ်။ ဆရာတော်တွေဟာ သက်တော်အားဖြင့် (၆၀) ၀န်းကျင်ခန့် ရှိကြ ပြီး ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဥပဓိရုပ်ပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် ဘုရားတလိုက်မိပါတယ်။
ထောင်မှူးက လိုအပ်တဲ့ထောင်ကျစာရင်းတွေသွင်းပြီး ထောင်တွင်းနေထိုင်မှုစည်းကမ်းတွေ ညွှန်ကြားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စည်းကမ်းထိန်း လို့ခေါ်တဲ့ ထောင်ကျအကျဉ်းသားအရာရှိ သန်းအောင်က ထောင်မှူးလာတဲ့အခါ၊ ထောင်ပိုင်လာတဲ့အခါ ထိုင်ရမယ့်ပုံစံနည်းတွေကို သင် ကြားပါတော့တယ်။ ပြီးတော့မှ ထောင်ထဲကို လူသစ်ရောက်ရင် မောင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်း ဆရာတော်တွေကို ကြိမ်းမောင်းပါတယ်။
“ခင်ဗျားတို့ ထောင်အပြင်မှာ ဘာကောင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဂုဏ်ဒြပ်တွေအားလုံးကို ထောင်ဗူးဝမှာ ချိတ်ထားခဲ့။ ထောင်ထဲမှာ ဘုန်း ကြီး၊ သံဃာဆိုတာမရှိဘူး။ နာမည်ခေါ်ရင် လူနာမည်ပဲခေါ်၊ ပြော။ ထမင်း (၁) နပ်စားတာတွေ၊ (၂) နပ်စားတာတွေ မလိုချင်ဘူး။ ရှုပ်ရှုပ်ယှက် ယှက်လုပ်တာ မကြိုက်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ကတုံးမတုံးရဘူး။ ဒီစည်းကမ်းတွေမလိုက်နာရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ကျောပေါ် တုတ်ရောက်ပြီသာမှတ်။ သန်းအောင် ဘာလည်းဆိုတာ သိချင်ရင် စမ်းကြည့်စမ်း ”
သံဃာတော်တွေကို ယုတ်ယုတ်မာမာစကားလုံးတွေနဲ့ဟိန်းဟောက်ပြီး န၀တကပေးတဲ့အာဏာကို အသုံးချပါတယ်။ ပုံစံထိုင်တာတွေပြီး တဲ့အခါမှာ ဆရာတော်တို့ကို ကျနော်တို့အဆောင်က အိပ်ခန်း (၂) မှာ နေရာချပါတယ်။ ဆရာတော်တွေဟာ ထောင်ထဲမှာ န၀တရဲ့ယုတ် မာမှုကြောင့် လူဝတ်လဲခံထားရပေမယ့် ရဟန်းတို့စောင့်ထိန်းအပ်တဲ့ ၀ိနည်း၊ သိဏ္ခာတော်တွေကို ဆက်လက်စောင့်ဆည်း ထိန်းသိမ်းကြပါ တယ်။ ကျနော်တို့က ဆရာတော်ကြီးတွေကို န၀တက ထောင်ချအရေးယူခဲ့တာနဲ့ပက်သက်ပြီး မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာ အဖြစ်မှန်ကို သိ လိုက်ရပါတယ်။
ဆရာတော် (၃) ပါးအနက် (၂) ပါးက ရန်ကုန်တိုင်း သာကေတမြို့နယ် မဟာဗောဓိ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်က စာချဆရာတော်တွေ ဖြစ်ကြပြီး ကျန်ဆရာတော်တပါးက ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန်မြို့နယ် ရွာမပရိယတ္တိစာသင်တိုက်က တိုက်အုပ်ဆရာတော် ဦးတိလောကဘိဝံသ ဆရာ တော်ဘုရားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်တို့ရဲ့ အမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပုံအကြောင်းကိုပြောပြရရင် မန္တလေးမြို့ကနေစတင်ပြီး ပြောရပါလိမ့်မယ်။
၁၉၉၀ပြည့် သြဂုတ်လ (၈) ရက်နေ့မှာ (၈၈၈၈) အထိမ်းအမှတ်နေ့အဖြစ် ဆွမ်းလောင်းပွဲကို မန္တလေးခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (အခြေခံပညာ)ကနေဦးဆောင်ပြီး (၈၄) လမ်းမပေါ်ရှိ လူထုဦးလှ၊ လူထုဒေါ်အမာတို့အိမ်ရှေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သံဃာတော်တွေကို အေးချမ်းဆိတ်ငြိမ် စွာဆွမ်းလောင်းနေချိန်မှာ မန္တလေးမြို့က တာဝန်ကျစစ်သားတွေက ဆွမ်းလောင်းပွဲမှာလွှင့်ထူထားတဲ့ အနက်ရောင်ခွပ်ဒေါင်းအလံကို (အ နက်ရောင်တပ်ဆင်ရခြင်းအဓိပ္ပါယ်က ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက် ၀မ်းနည်းတဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်) အတင်းအဓမ္မ ဇွတ်ဖြုတ်ချ ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ အခြေခံပညာကျောင်းသား ကိုမိုးကျော်ကတားဆီးတာကြောင့် ကိုမိုးကျော်ကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလိုမပြုလုပ်ဖို့အတွက် ဆွမ်းခံထွက်လာတဲ့သံဃာတော်တွေကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာ စစ်သားတွေက သံဃာတော်တွေကို ဆောင့် တွန်းလိုက်ပါတယ်။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ သတိပေးမှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိပဲ ပစ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။ တခဏအတွင်းမှာပဲ (၈၄) လမ်းမကြီး တ ခုလုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပါတယ်။
လမ်းမထက်ပေါ်မှာ ယမ်းငွေ့တွေကြောင့် သပိတ်တွေ လွင့်ကျ၊ ဆွမ်းတွေပြန့်ကြဲ၊ လဲပြိုနေတဲ့ရဟန်းတွေ ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ အချို့ရဟန်း သံဃာတွေကို အိမ်တွေအချို့က ကူညီပြုစုကြပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေက ဆရာတော်အချို့ကို ဆေးရုံကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ စစ် တပ်ကလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့သံဃာအချို့ကို စစ်ကားပေါ်တင်ဆောင်သွားပါတယ်။
မကြာမီ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ သွေးစွန်းသွားတ (၈၄) လမ်းမကြီးပေါ်ကို မီးသတ်ကားတွေနဲ့ ဆေးကြောပါတော့တယ်။ အဲဒီဖြစ်ပွားတဲ့ညပဲ မန္တလေးတိုင်းမှူးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်က ပြောကြားတဲ့အခါမှာ ရဟန်းသံဃာတော်တစ်ပါးမှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာဖြစ်မှုမရှိဘူးလို့ ပြောဆိုသွား ပါတယ်။ တိကျခိုင်လုံတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (ဗကသ) နဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်သမဂ္ဂ (ဗကလ) တို့ပူးပေါင်းပြီး စုံစမ်းမှုအဖွဲ့ကို မန္တလေးမြို့မှာဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မန္တလေးဘုရားကြီးကျောင်းတိုက်မှာ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပါတော့တယ်။
အဲဒီမှာ သိရှိရတာကတော့ ထီးလင်းကျောင်းတိုက်က ကိုရင်တစ်ပါး ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိသွားတာကြောင့် မန္တလေးဆေးရုံကြီးကို ပို့လိုက်ရပါတယ်။ သံဃာတော်တွေက စောင့်ရှောက်နေစဉ် အခြေအနေဆိုးရွားလာတာကြောင့် စစ်တပ်က စစ်ဆေးရုံမှာကုသဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောပြီး ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်မှာ ယနေ့တိုင် ကိုရင်လေးသတင်းမှာ ပျောက်ကွယ်နေပါတယ်။ ကျနော့်ကို မန္တလေးမြို့ လေးပြင်လေးရပ် သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့ချုပ်က ဆရာတော်ဦးရေ၀တကပြောပြရာတွင် အဲဒီအရေးအခင်းဖြစ်ပွားရာတွင် ရဟန်းများပျံလွန်တော်မူတာတွေ အများ အပြားရှိကြောင်း၊ ဒဏ်ရာရတဲ့ရဟန်းသံဃာတော်တွေလည်း အများကြီးရှိကြောင်း၊ စစ်တပ်က လူကို သေစေနိုင်တဲ့အထိ ရည်ရွယ်ပစ်ခတ်တာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သာဓကအနေနဲ့ ကျည်ဆံထိမှန်ထားတဲ့ သပိတ်၊ သင်္ကန်းနဲ့ သွေးစွန်းနေတဲ့ သင်္ကန်းတွေရှိကြောင်း၊ သပိတ်ကို ရဟန်းများက ရင်မှာပိုက်ပြီး ဆွမ်းခံထွက်တာမို့ သပိတ်ကိုကျည်ဆံထိမှန်တာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူကိုချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်တာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကား တာဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော်က ရှင်းပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဲဒီအမှုအခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိကျခိုင်မာတဲ့ အချက်အလက်တွေစုဆောင်းမိချိန်မှာတော့ ပရိတ္တိသာသနာထွန်းကားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာစာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုအပြည့်ရှိတဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ သံဃာတော်တွေ အားလုံးစုရုံးပြီး သံဃာတော်တွေ၊ ရဟန်းတွေကို သတ်ဖြတ်တဲ့၊ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို စော်ကားဖျက်ဆီးတဲ့ စစ်တပ်နဲ့ အပေါင်းအပါတွေကို ဘာသာရေးအရ ဒဏ်ခတ်တဲ့အနေနဲ့ စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက် တဲ့ အပေါင်းအပါ၊ ဆွေမျိုးတွေ၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေက ကပ်လှူတဲ့ကိစ္စအမှုအစုစုကို လက်မခံခြင်း၊ သာရေး၊ နာရေးပင့်ဖိတ်တာတွေကို လက် မခံတော့ခြင်းဖြင့် န၀တကို သပိတ်မှောက်ဖို့ စတင်ပါတော့တယ်။
န၀တနဲ့ ဘာသာရေးအရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုလုပ်တော့ပဲ ဘာသာရေးအရ ဒဏ်ခတ်သပိတ်မှောက်တဲ့ “ပတ္တနိကုဇ္ဖန ကံဆောင် ခြင်း” အမှုကို ပြုလုပ်ပါတော့တယ်။ မန္တလေးမြို့ လေးပြင်းလေးရပ် သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးဆောင်ဆင်နွှဲတဲ့ သပိတ်မှောက် ကံဆောင်ခြင်း ဟာ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ အခြားမြို့ကြီးတွေကို တမဟုတ်ချင်း ကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားပါတော့တယ်။
မန္တလေးမြို့ကနေ ကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားတဲ့ ကံဆောင်သပိတ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့က ရဟန်းရှင်လူ၊ ပြည်သူလူထုအကြား နာမည် ကြီးတဲ့ ဆရာတော် (၂) ပါးကို န၀တက ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ကံဆောင်သပိတ် ဦးဆောင်ဆင်နွှဲတယ်လို့ န၀တက စွပ်စွဲလိုက်တဲ့ ဆရာတော် (၂) ပါးကတော့ ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမှာတည်ရှိတဲ့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်က တိပိဋကဓရဘွဲ့ရ တိုက်အုပ်စာချဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလလင်္ကာရနဲ့ နောက်ဆရာတော်တပါးကတော့ အင်းစိန်ရွာမ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်က တိုက်အုပ်စာချ ဆရာတော် ဦးတိလောကဘိဝံသတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော် ဦးတိလောကဘိဝံသနဲ့ပတ်သက်ပြီး တင်ပြပါဦးမယ်။
ဆရာတော်ဟာ အင်းစိန်ရွာမပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးပြီးရဟန်းများ၊ သီလရှင်များကို စာသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ ဆရာ တော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ အဘိဓမ္မာပညာရပ်များမှာ အထူးတတ်ကျွမ်းနားလည်ပြီး စာသင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်း ရှင်းလင်း အောင်သင်ကြားနိုင်တဲ့အရည်အသွေးရှိတဲ့ စာချတိုက်အုပ် ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတော်ရဲ့ သင်ကြားမှုကောင်းမွန်တာကြောင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က သံဃာတော်တွေ အမြဲလို ကြွချီလာတတ်တာကြောင့် ဆရာတော် ရဲ့ကျောင်းတိုက်မှာ နှစ်စဉ်သံဃာအပါး (၅၀၀) နီးပါး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ရေးသားထုတ်ဝေတဲ့ ဗုဒ္ဓ အဘိဓမ္မာကျမ်းစာ အုပ်တွေဟာ ရဟန်းသံဃာအများ မရှိမဖြစ်ကိုင်ဆောင်တတ်တဲ့စာအုပ်တွေအဖြစ် ကျော်ကြားလှပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်တွေကိုလည်း ဗုဒ္ဓစာ ပေတွေ ဖြန့်ချီရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီးမှူးတဲ့ အင်းစိန်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်က ရဟန်းတွေလည်း သံဃာ့စာမေးပွဲများမှာ ပထမကျော်အဆင့်အထိ ရရှိတတ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးအရ ကံဆောင်သပိတ်မှောက်မှုကို ရန်ကုန်တိုင်းရှိ သံဃာအများအပြားကြား လှုံ့ဆော်ဝါဒဖြန့်တယ်လို့ န၀တကစွပ်စွဲလိုက်ပြီး “ပိဋိကတ်ကိုဖျက်တဲ့ ကြွက်စုတ်” ဆိုတဲ့ကဗျာကို ဆရာတော်ကရေးသားတာဖြစ်တယ်လို့ ထပ်မံစွပ်စွဲပါတယ်။
မန္တလေးမြို့မှာ ဘာသာရေး ကံဆောင်သပိတ်မှောက်မှု အရှိန်မြင့်တက်နေချိန်မှာ ကံဆောင်သပိတ်မှောက်နေတဲ့ ဆရာတော့်ကျောင်းတိုက် ကို သပိတ်လှန်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အင်းစိန်မြို့နယ် မ၀တဥက္ကဌနဲ့ သာသနာရေးဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအံ့မောင်တို့ ရောက်ရှိလာပါ တယ်။ ပြီးတော့ ကျောင်းတိုက်ရဲ့ဝင်ပေါက်မှန်သမျှကို စစ်တပ်နဲ့ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီး ရဟန်းသံဃာအားလုံး တစ်ပါးမှ ဆွမ်းခံမထွက်ကြရန်နဲ့ အ ၀င်အထွက် လုံးဝမလုပ်ကြဖို့ တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ အင်းစိန်မ၀တနဲ့ သာသနာရေးဦးစီးဌာနကနေ ဆွမ်းကပ်ပါတယ်။ ဆရာတော်က ဘာမှတုန့်ပြန်ပြောဆိုခြင်းမရှိပဲနေလိုက်ပြီး ဆွမ်းစားချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာ တုန်းမောင်းခေါက်လိုက်ပါတယ်။
စာသင်သား သံဃာတွေဟာ ဆွမ်းစားဆောင်အတွင်း တန်းစီကြွလာကြပါတယ်။ ဆရာတော်က သံဃာအများကို ဒီကနေ့ ဆွမ်းအလှူရှင်က တော့ အင်းစိန်မြို့နယ် မ၀တ ဥက္ကဌနဲ့ သာသနာရေးဦးစီးဌာနတို့က ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းတာဖြစ်ကြောင်း၊ ရဟန်းတို့အနေနဲ့ ဆွမ်းအလှူရှင်များကို မေတ္တာပို့စားသုံးနိုင်ကြောင်း မြွက်ကြားပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဆွမ်းစားဆောင်အတွင်းရောက်ရှိလာကြတဲ့ သံဃာအပါး (၅၀၀) ခန့်ဟာ ဆွမ်း ဘုဉ်းမပေးတော့ပဲ နေရာကနေ တစ်ပါးမကျန် ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြပါတော့တယ်။
အင်းစိန်မ၀တဥက္ကဌဟာ အကြီးအကျယ်အရှက်ရပြီး သံဃာအပေါ် အမျက်ထွက်သွားပါတယ်။ ဆရာတော်က အင်းစိန်မ၀တဥက္ကဌနဲ့ ဦးအံ့ မောင်တို့ကို ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ သံဃာတွေအပေါ် လှုံ့ဆော်စည်းရုံးမှုမရှိကြောင်း၊ သံဃာတော်အများရဲ့ဆန္ဒကို မြတ်စွာဘုရားတောင်မှ မ လွန်ဆန်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြပြောဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရှက်တရားနဲ့ ဒေါသ၊ မောဟမီးတွေ တောက်လောင်နေသူတွေက ဒီဘာသာရေး သပိတ်ကိုမလှန်ရင် ဖြစ်လာမယ့်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကို လုံးဝတာဝန်မယူကြောင်းပြောဆိုပြီး ထွက်သွားပါတယ်။ ကျောင်းတိုက် တံခါးတွေကိုလည်း (၁၂) နာရီကျော်မှ ပြန်လည်ဖွင့်ပေးပါတယ်။ သံဃာတော်တွေ ဆွမ်းငတ်ခဲ့ပါတယ်။ မကြာမီပါပဲ ဆရာတော်ကို လာ ရောက် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။
န၀တ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေနဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီး ဆရာတော်ကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်ပါတော့တယ်။ စားပွဲတစ်လုံးပေါ်မှာ တုတ် တစ်ချောင်းနဲ့ ပုဆိုးတစ်ထည်တင်ထားပြီး “ကြိုက်တာရွေးစမ်း။ အသားမနာချင်ရင် ပုဆိုးဝတ်လိုက်။ ခင်ဗျားဟာ အခုအချိန်ကစပြီး လူဖြစ် သွားပြီ။ ခင်ဗျားတို့က သင်္ကန်းဝတ်တွေ၊ သံဃာအတုအယောင်တွေ” ဆိုပြီး ဆရာတော်ကို စွပ်စွဲပြီး “ခင်ဗျားစစ်ခုံရုံးမှာဝန်ခံရင် နှစ်နည်းမယ်။ ၀န်မခံရင် နှစ်လည်းများမယ်၊ အရိုက်လည်းခံရမယ်။ အသက်ကြီးမှ အရိုက်မခံချင်စမ်းပါနဲ့။ အသက်ကြီးမှမိုက်ကြတာကိုး ကြီးမိုက်တွေရဲ့”
ရုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ ဆရာတော်ကိုစော်ကားပါတယ်။ ဆရာတော်မှာ စစ်ခုံရုံးမှာ တစ်လုံးတစ်ပါဒမှ ပြန်လည်ချေပ ပြော ဆိုခွင့်မရပဲ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ကံဆောငသပိတ်မှောက်မှု ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်မှုဖြင့် အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် (၁၅) နှစ် ရင့်ရင့်သီးသီး အမိန့်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ န၀တစစ်ဘီလူးတွေက သံဃာတော်တွေကို ဖမ်းဆီး၊ အတင်းအဓမ္မ လူဝတ်လဲစေပြီး သိက္ခာချပေမယ့်လည်း ရဟန်းတို့အနေနဲ့ စိတ်အတွင်းမှ သိက္ခာချခြင်း၊ လူအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုပါက ရဟန်းအရာမြောက်ဆဲပဲဖြစ်ပြီး ဆရာတော်ကြီးတွေ အားလုံး ထောင်အတွင်းမှာလည်း ရဟန်းတို့ရဲ့ သိက္ခာပုဒ်၊ ၀ိနည်းတွေ စောင့်ထိန်းကြပါတယ်။
ဆရာတော်ကို ဖမ်းဆီးထောင်ချအပြီးမှာ ၁၉၉၀ နှစ်မှာ ဆရာတော်ကျောင်းတိုက်က သံဃာတစ်ပါးက သံဃာ့စာမေးပွဲမှာ ပထမကျော်ရရှိခဲ့ ပေမယ့် ကံဆောင်သပိတ်မှောက်မှုထဲပါဝင်တဲ့ ကျောင်းတိုက်ဖြစ်တာကြောင့် ဆုကိုမပေးပဲ ထားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ အဖမ်းမခံရခင် အချိန်အထိ ကမ္ဘာအေး သာသနာ့တက္ကသိုလ်မှာ အဘိဓမ္မာပါမောက္ခချုပ်နဲ့ နိုင်ငံတော်သံဃာ့ဝန်ဆောင်အဖွဲ့မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ကို အင်းစိန်ထောင်အတွင်း (၁) နှစ်နီးနီး ဖမ်းဆီးပြီးအကြာမှာ ဆရာတော်ကို ခံဝန်ချက်တောင်မထိုးခိုင်းတော့ပဲ ချက်ချင်း ပြန်လွှတ်ပေးလိုက် ပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ ထောင်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး ယခင်လုပ်ဆောင်နေကြ သာသနာ့တာဝန်တွေကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင် ပါတယ်။ ထောင်ကလွတ်မြောက်လာပြီး (၁) နှစ်နီးနီးအချိန်အထိ န၀တရဲ့အထောက်အပံ့ကိုလုံးဝမယူပဲ ကျောင်းတိုက်ရှိ သံဃာအပါး (၅၀၀) ကျော်၏ နေထိုင်ရေး၊ စာသင်ကြားရေးတို့ကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဆရာတော်အကြောင်းကိုကြားသိတာနဲ့ ဒေါ်စုနဲ့အတူ အင်း စိန်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ခံ ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန် (အငြိမ်းစား)၊ သခင်ဦးအုန်းမြင့်တို့လိုက်ပါပြီး ဆရာတော်ကို သွားရောက် ဖူးမြော်ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဆရာတော်ကိုဖူးမြော်ပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီး နောက်တစ်နေ့မှာပဲ သာသနာရေးဝန်ကြီး ဌာနက ဒုဝန်ကြီးက ဆရာတော်ကျောင်းကိုရောက်လာပါတယ်။ အင်းစိန်ရွာမ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကို တပ်မတော် ကြည်း၊ ရေ၊ လေ၊ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆားပေးအပ်လှူဒါန်းမည့်ပွဲကို အကျဉ်းဦးစီးဌာနအား အမိန့်နဲ့ဖယ်ရှားပြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းလို့ခေါ်တဲ့ ကြံ့ ဖွတ်အသင်းဌာနချုပ်ကနေ အဓမ္မ၀င်ရောက်လှူဒါန်းတာတွေ ပြုလုပ်ပါတယ်။
နောက်တော့ န၀တ အတွင်းရေးမှူး (၂) ရောက်ရှိလာပြီး ဆရာတော်ကို ကန်တော့ပါတယ်။ န၀တဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်ကြိုင် ကြိုင်တို့က (၃) ထပ်တိုက် ကျောင်းဆောင်သစ်ကြီး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းဖို့အတွက် ရေစက်ချပွဲတွေလုပ်ပြီး သူတို့မှားလေသမျှအတွက် ဒေ၀ဒတ်တို့ တောင်းပန်ကြလေသလားဆိုတာ ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပဲ သိပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံအာဏာကိုသိမ်းယူပြီးကတည်းက ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်ရဟန်းသံဃာတွေကို ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံနဲ့ လက်ရောက်စော်ကားမှုတွေအတွက် ပျားရည်နဲ့ဝမ်းချပွဲတွေလုပ်ပြီး သာသ နာ့ဒကာတော်တွေအဖြစ် ဖန်တီးနေကြပါတော့တယ်။
၁၉၉၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ န၀တက သူတို့ကိုယ်တိုင် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းလေးအတွင်းကမှ သင်္ကန်းချွတ်၊ လူဝတ်လဲစေပြီး သင်္ကန်း ၀တ်တွေ၊ ရဟန်းတု၊ ရဟန်းယောင်တွေလို့ မကြားဝံ့မနာသာ ပုတ်ခတ်စော်ကားခဲ့ပြီး အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် (၁၅) ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဆရာ တော် ဦးတိလောကဘိဝံသကို သာသနာရေးမှာ ဒုတိယအဆင့်ရှိ “အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ” ဘွဲ့ကို ဆပ်ကပ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ န၀တရဲ့ဘာသာရေး မျက်လှည့်ပြပွဲကို ကျနော်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှနားမလည်တတ်အောင် ဖြစ်မိပါတယ်။
န၀တ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် (ကွယ်လွန်) ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်း ကံ၊ ကံ၏အကျိုးကို တပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်” တဲ့။
သာသနာကို ဖျက်ဆီး၊ ဘုရားသာသနာရဟန်းများကို ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်၊ သင်္ကန်းဝတ်တွေလို့ ရင့်ရင့်သီးသီးပုတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ န၀တ တို့ သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ် (ကံ) နဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ချိန်ချိန်မှာ သူတို့ခံစားကြရမှာ သေချာပါတယ်။
• • •နောက်ဆက်တွဲ
• ဆရာတော် အရှင်တိလောကာဘိဝံသ၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တတိလောကာဘိဝံသသည် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဇလွန်မြို့နယ်၊ ညောင်ပင်သာရွာ၊ ခမည်းတော် ဦးဘဖေ + မယ်တော် ဒေါ်စော စိန်တို့မှ ၁၃၀၀ ပြည့်နှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁ ရက်၊ စနေနေ့နံနက် ၄ နာရီအချိန်တွင်ဖွားမြင်သော စတုတ္ထမြောက်သားရတနာဖြစ်ပါသည်။
• ရှင်ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူခြင်း
ဆရာတော်လောင်းလျာသည် ၆ နှစ်သားအရွယ်တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၁၅ နှစ်သားအရွယ်တွင်တစ်ကြိမ်၊ ဇလွန်မြို့နယ်၊ ညောင်ပင်သာကျောင်း ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒ၀ံသကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ ခမည်းတော် + မယ်တော်တို့၏ ပစ္စာယာနုဂ္ဂဟကိုခံယူကာ ရှင်သာမဏေအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိ တော် မူခဲ့ပါသည်၊ ဘွဲ့တော်မှာရှင်တိလောက ဖြစ်ပါသည်။ ၁၃၂၀ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၀ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ သက်တော် ၂၀ အရွယ်တွင် ဇလွန်မြို့နယ်၊ ပကွဲကျောင်းဟောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တစန္ဒာဝရကို ဥပဇ္စ္စ္စ္ဈာယ်ပြု၍ ညောင်ပင်သာကျေးရွာနေ နောင်တော်ဖြစ်သူ ဦးမျက်ပြူး + ဒေါ်သိန်းရင်တို့၏ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟကိုခံယူကာ ညောင်ပင်သာကျောင်း ခဏ္ဍသိမ်တော်၌ မြင့်မြတ်သောရဟန်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါ သည်။
• စာပေပရိယတ္တိ သင်ကြားဆည်းပူးတော်မူခြင်း
ဆရာတော်လောင်းလျာသည် ညောင်ပင်သာရွာဦးကျောင်းဆရာတော် နှင့်ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ကံကြီးကုန်းရွာ တောင်ကျောင်းဆရာတော် ဦးဝါသ၀တို့ထံတွင် အခြေခံမှစ၍ ပိဋကတ်ကျမ်းစာများကို သင်ယူဆည်းပူးတော်မူခဲ့ပြီး ၁၃၁၇ ခုနှစ်တွင် မြင်းခြံမြို့၊ ကိုးဆောင်တိုက်ဆရာ တော် အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု ၊ အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မ ဇောတိကဓဇ၊ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဘဒ္ဒန္တသောဘိတထံတွင် မူလတန်းမှ၊ အစိုးရ ဓမ္မာစရိယပြီးသည့်တိုင်အောင် ၉ နှစ်ခန့် ပိဋကတ်ကျမ်းစာများကို သင်ယူဆည်းပူးတော်မူခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မန္တ လေးမြို့၊ ချမ်းသာကြီးတိုက်၊ ညောင်ကန်တိုက်၊ ရန်ကုန်မြို့ခြောက်ထပ်ကြီးတိုက်တို့တွင် လှည့်လည်သီတင်းသုံးလျက် စာချအကျော် ဆရာ တော်များထံတွင် ပရိယတ္တိစာပေများကို လေ့လာသင်ယူတော်မူခဲ့ပါသည်။
• အောင်မြင်တော်မူခဲ့သော စာမေးပွဲများ
နိုင်ငံတော်အစိုးရ အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ – ၃ဆင့်၊ ဋီကာကျော် ဂုဏ်ထူးဆောင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ – ၃ဆင့်၊ ဇ လွန်မြို့နယ် လယ်ဦးကျောင်း၌ကျင်းပသော ၀ိနယမူလတန်းနှင့် ၀ိနယန္တရိက သင်္ဂြိုဟ်တန်း၊ မြင်းခြံမြို့၊ ကိုးဆောင်တိုက် သဒ္ဓမပါလ စာမေးပွဲ ပထမငယ်၊ ပထမလတ်၊ ပထမကြီး၊ စာချတန်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ပထမငယ်၊ ပထမလတ်၊ ပထမကြီး၊ သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ (တစ်နိုင်ငံလုံး ဒုတိယ) သာသနဓဇ သိရီပ၀ရ ဓမ္မာစရိယ (ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်မြန်မာဂုဏ်ထူး) မန္တလေး သကျသီဟ စာသင်တန်း၊ ဓမ္မာစရိယတန်းတို့ကို အောင် မြင်တော်မူခဲ့ပါသည်။
ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ကံကြီးကုန်းရွာ၌ ၁၃၂၈-၂၉ ခုနှစ်တွင် ဘကမူလတန်းဆရာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြင်းခြံမြို့၊ ကိုးဆောင်တိုက်၌ ၁၃၂၉ ခုနှစ်တွင် စာချဂဏ၀ါစကအဖြစ် လည်းကောင်း၊ အင်းစိန်မြို့ရွာမပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၌ ၁၃၃၂ ခုနှစ်မှ ယနေ့တိုင်အောင် တာဝန်ခံစာချအဖြစ် လည်းကောင်း၊ စာပေပရိယတ္တိများကို ပို့ချတော်မူခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှစ၍ ၁၃၅၀ ခုနှစ်အထိ ၄ နှစ်ခန့် အဘိဓမ္မမဟာဌာန နာယက (ပါမောက္ခ) ၊ ဒုတိယနာယကချုပ်(ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်) အဖြစ်တာဝန်ယူ၍ စာပေ ကျမ်းဂန်များကို သင်ကြားပို့ချတော်မူခဲ့ပါသည်။
• ရေးသားပြုစုသော ကျမ်းစာများ
စာပေပရိယတ်ပို့ချတော်မူရင်း စာသင်သားများနှင့် သုတေသီတို့အတွက် ကျမ်းဂန်များ ပြုစုရေးသားခဲ့သည်။ ယင်းကျမ်းစာများမှာ …
၁။ အဖြေစုံ ၇ ကျမ်း (စနစ်ဟောင်းငယ်၊ လတ်၊ ကြီး အဖြေစုံ ၃ ကျမ်း၊ စနစ်သစ်မူလ၊ ငယ်၊ လတ်၊ ကြီး အဖြေစုံ ၄ ကျမ်း)
၂။ လက်ဆောင်ကျမ်း ၁၁ ကျမ်း (မာတိကာဓာတုကထာ လက်ဆောင်၊ ယမက လက်ဆောင် ၂ ကျမ်း၊ ပဋ္ဌာန်းလက်ဆောင်၊ ပဋ္ဌာန်းပို့ချစဉ်လက် ဆောင်၊ အဘိဓမ္မာလက်ဆောင်၊ ဆန်းလက်ဆောင်၊ ပါဠိသဒ္ဒါအသုံးအနူန်းနှင့် ပါဠိစာပေကောက်နုတ်ချက်လက်ဆောင်၊ သဒ္ဒါလက်ဆောင်၊ သုတ်နက်လက်ဆောင်၊ သဒ္ဒါကြီးနိဿယလက်ဆောင်)။
၃။ ဗဟုသုတပညာပေး ၆ ကျမ်း (ရဟန်းခံရှင်ပြုအကြောင်း၊ ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာသိစရာနှင့်ဗုဒ္ဓသာသနာ့သမိုင်း၊ စေတီပုထိုး၊ မဲလံဆံတော်ရှင်၊ သကျမုနိ၊ လက်ရွေးစင်ဆောင်းပါးများ၊ ပရိတ် + ဂါထာ + မန္တန်စသော ပုံနှိပ်ပြီး ကျမ်းပေါင်း ၂၄ ကျမ်းနှင့် ဂန္ထာဘရဏနှင့် ဘုရားကြီးနိယံ လက်ဆောင်၊ အဋ္ဌသာလိနီအဖြေစုံ စသော ပုံမနှိပ်ရသေးသည့်ကျမ်းများကို ရေးသားပြုစုတော်မူခဲ့ပါသည်။
ယခု နောက်ဆုံး ရေးသားခဲ့သည်မှာ မြန်မာ့သာသနာ့သမိုင်းတွင် အထင်ကရအနေဖြင့် သမိုင်းတွင်ကျန်ရစ်မည့် ပါဠိဘာသာဖြင့်ရေးသားခဲ့ သည့် ပရိတ်ကြီးဋီကာသစ်ခေါ် ပရိတ္တအဘိန၀ဋီကာကျမ်းနှင့် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်သစ်ကျမ်းများဖြစ်ပါသည်။
• သာသနာရေး အားပေးဆောင်ရွက်တော်မူခြင်း
ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃအဖွဲ့အစည်း ပထမအကြိမ် မြို့နယ်နှင့်တိုင်း ၀ိနည်းဓိုရ်၊ ဒုတိယအကြိမ် အင်းစိန်မြို့နယ် သံဃနာယကအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ တတိယအကြိမ် နိုင်ငံတော်ဗဟို သံဃာ့ဝန်ဆောင်နှင့် တောင်တန်း သာသနာပြု သြ၀ါဒါစရိယ၊ အင်းစိန်မြို့နယ် ပထမပြန်စာမေးပွဲကြီးကြပ် ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) အဘိဓမ္မပါမောက္ခ၊ ဒုတိယနာယကချုပ် (ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်)၊ ပဉ္စမအကြိမ် နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယက၊ ဆဋ္ဌမအကြိမ် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက တွဲဖက်အကျိုးတော်ဆောင်၊ နိုင်ငံတော်သံဃ မဟာနာယက ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အဘိဓမ္မာပြန့်ပွားရေးအသင်း ပရိယတ္တိနုဂ္ဂဟအသင်း စသောအသင်းများ၏ သြ၀ါဒစရိယတာဝန်များကို ထမ်း ဆောင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ၎င်းပြင် နွေရာသီ ယမိုက် + ပဋ္ဌာန်း + ဆန်း စသောသင်တန်းများကို ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာဗျူဟာအသင်း၌ ၃ နှစ်၊ အင်းစိန်ရွာမ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၌ ၁၄ နှစ်၊ ပဲခူး၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး၊ ကလေးမြို့တို့၌ အခါအားလျော်စွာ လှည့်လည်ပို့ချတော်မူခဲ့ပါ သည်။ လူဝတ်ကြောင်များအတွက် အဘိဓမ္မာသင်တန်းများကိုလည်း အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲများဖြေဆိုနိုင်သည်အထိ ၁ နှစ် ၂ ကြိမ်ခန့်ပို့ချ ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ ရဟန်းခံ သိမ်သမုတ်စသော ကံကြီး၊ ကံငယ် သံဃာ့ကိစ္စများကိုလည်း ဆက်စပ်နေသည့်နေရာတိုင်း ဦးဆောင်ဦး ရွက်ပြုကာ အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးတော်မူလေ့ရှိသည်။
• ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ထူးခြားသောဂုဏ်ရည်များ
ဆရာတော်သည် ပရိယတ္တိစာပေများကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ကိုယ်ကြိုးမငဲ့ပဲ ဆောင်ရွက်လေ့ရှိခြင်း၊ စာပေဗဟုသုတ အကူအညီ တောင်းခံလာသူ မှန်သမျှအား ပုဂ္ဂိုလ်မရွေး၊ အချိန်အခါမရွေး အများအတွက်ကိုမဆိုထားနှင့် သာမန်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုပင် ထက်သန်စွာကူညီပေးလေ့ ရှိခြင်း၊ သင်နည်းစနစ်များကိုလည်း လွယ်သည်ထက်လွယ်အောင် ခေတ်မီအောင် တီထွင်ကြံဆပြီး သင်ကြားပို့ချရေးသားလေ့ရှိခြင်း၊ အများ နှင့်ဆက်ဆံရာတွင် ဟိတ်ဟန်မရှိပဲ တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာ ရိုးရိုးသားသား ဆက်ဆံလေ့ရှိခြင်း၊ ပရိယတ်၊ ပဋိပတ် ၂ မျိုးလုံးကို မြတ်နိုးစွာ မိမိအတွက်ရော သူတစ်ပါးအတွက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးလေ့ရှိခြင်း၊ ပစ္စည်းလာဘ်လာဘကို တွယ်တာမှုမရှိဘဲ ရက်ရက်ရောရော ပေးကမ်း လှူဒါန်းလေ့ရှိခြင်း၊ တပည့်များအပေါ် မိဘသဖွယ် စေတနာမေတ္တာထား၍ စောင့်ရှောက်ချီးမြှောက်လေ့ရှိခြင်း၊ ပြောဆိုဆုံးမရာ၌ အမိန့်ပေး သည့်သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲ ကျိုးကြောင်းယုတ္တိပြ၍ တရားဓမ္မဖြင့် ညင်သာစွာဆိုဆုံးမလေ့ရှိခြင်း ဒါယကာ ဒါယိကာမများအပေါ်တွင် တွယ် တာ မက်မောမှုမထားပဲ ကုလေသု အနနုဂိဒ္ဓဂုဏ်နှင့် ညီနိုင်သမျှညီအောင် လိုက်နာကျင့်သုံးလေ့ရှိခြင်း စသောဂုဏ်တို့သည် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူတို့၏ ကြည်ညိုလေးစားခြင်းခံရသော ဆရာတော်၏ ဂုဏ်ရည်များဖြစ်ပါသည်။
2 Responses to အညတရအကျဉ်းသားရဟန်းတော်များ (၁၈) – ဆရာတော်ဦးတိလောကာဘိဝံသ
U AYE on May 4, 2012 at 11:02 pm
THEY ARE NOT HUMAN BEING. THESE CRUEL EVENTS SHOULDN’T HAPPENED ANY MORE.
Sithu on May 5, 2012 at 9:37 am
Thank အရှင်ပညာနန္ဒ for the article of Sayagyi.
Beginning of 1991, U Tilawka, U Eingitha, U Wisitta (Shwe Phone Pwint) and Ma Soe Yain Sayadaw are in Room 7. U Eingitha is known as Parikari Sayadaw from Thaketa. Sayagyi was sentenced for7years and spent 1990, 1991, 1992, 1993 years if I correctly remembered.
ပြောဆိုဆုံးမရာ၌ အမိန့်ပေး သည့်သဘောမျိုးမဟုတ်ပဲ ကျိုးကြောင်းယုတ္တိပြ၍ တရားဓမ္မဖြင့် ညင်သာစွာဆိုဆုံးမလေ့ရှိခြင်း ဒါယကာ ဒါယိကာမများအပေါ်တွင် တွယ် တာ မက်မောမှုမထားပဲ ကုလေသု အနနုဂိဒ္ဓဂုဏ်နှင့် ညီနိုင်သမျှညီအောင် လိုက်နာကျင့်သုံးလေ့ရှိခြင်း စသောဂုဏ်
These words are absolutely right for Sayagyi U Tilawka Biwantha.